JOINTS Fekitori, Vatengesi - China JOINTS Vagadziri
VSSJA-2 (B2F) Type Double Flange Limited Telescopic Yakabatana
Zvigadzirwa dhizaini maficha Iyo huru budy yechigadzirwa inogadzirwa zvemhando yepamusoro zvinhu, kuomarara kwakanyanya, nyore kushandisa, uye nekukurumidza kuisa. Ine yakanaka ngura kuramba, mafuta kuramba, asidhi uye alkali nemishonga. Iyo chigadzirwa chimiro dhizaini inonzwisisika.Kuiswa chisimbiso kuita kunovimbika. Hapana kutenderera kunodiwa.Easy kutakura uye kuburitsa, inogona kutsiva kutama, kusarongeka uye kukombama kwepombi mukati meimwe nhanho. Its kushanda musimboti iri mushure bei ...
Usazviomesera Rubber Joint
Performance maitikiro Anochinjika erabhabha akabatana, ayo anonziwo vibration absorber, pombi vibration absorber, inochinja mubatanidzwa uye hose mubatanidzwa uye zvichingodaro, ipombi yakabatana ine yakakwira kuchinjika, yakakwira mhepo kuomarara uye yakanaka yepakati-kuramba uye mamiriro ekunze kuramba. Hunhu hwayo hwekuita ndeiyi: 1. Iyo idiki muhukuru, kurema kuyerwa, yakanaka mukuchinjika, inokodzera kumisikidza uye kugadzirisa. 2. Panguva yekumisikidza, kuyambuka, axial uye angular kusumuka icha ...